Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Agwaetiti Vanilla na-eje ozi na Kọmitii Njem Nleta Africa
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Comoros • Akụkọ Madagascar • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • Akụkọ Mayotte • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Akụkọ mgbasa ozi nzụkọ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị Africa Tourism Board (ATB) nwere obi ụtọ ịkpọsa nhọpụta Pascal Viroleau, onye isi oche nke illatù Vanilla Islands, nke gụnyere Comoros, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion, na Seychelles, na Board. Ọ ga-eje ozi dịka onye otu na Board nke Minista Nọdụ Ala na Ndị Ọchịchị Ọchịchị ahọpụtara.
Ndị otu ọhụụ abanyela na nzukọ ahụ tupu mbido mbido nke ATB na-eme na Mọnde, Nọvemba 5, na elekere 1400 n'oge Ahịa njem njem ụwa na London.
Ndị isi njem njem njem 200, gụnyere ndị ozi si n'ọtụtụ mba Africa, yana Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO, ga-aga mmemme a na WTM.
pịa ebe a ịchọta ihe banyere nzukọ ndị njem njem nlegharị anya nke Africa na November 5 na ịdebanye aha.
Pascal Viroleau kwuru na ebumnobi bụ isi nke nzukọ Vanilla Islands bụ ịkwado mpaghara Osimiri Indian dị ka ebe ezumike zuru oke nke ụwa na-enye ọdịiche dị iche iche na-enweghị atụ na otu n'ime njedebe ikpeazụ nke njem njem na-aga n'ihu.
Ọrụ ya bụ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị njem na ndị isi nke obodo ọ bụla iji nye ha nka na atụmatụ imekọ ihe ọnụ iji melite arụmọrụ nke na-adọta ndị ọbịa dị elu na mpaghara na nhazi na njikọta ọnụ na mba ọ bụla so. akụrụngwa nkwalite njegharị.
Organizationtù Vanilla Islands na-achọ ịkwalite nkwanye ùgwù, mmekọrịta, nkwado na “joie de vivre” n’etiti ndị otu otu iji kwalite mpaghara ahụ nke ọma na ịdị n’otu n’okpuru otu nche anwụ. N'imezu ebumnuche dị iche iche, nzukọ a ga-arụ ọrụ na mmekorita ya na usoro ndị njem dị ugbu a nke steeti ndị otu ahụ.
Nzukọ a na-achọ ịkwalite aha njirimara na omume a na-ahụkarị nke ga-achọ ọzụzụ na mgbanwe n'etiti ndị ọrụ na ndị mmekọ iji bulie ọkwa na ụkpụrụ site na mmekọrịta na omume ndị a na-achọ iji dozie ọdịiche ahụ na ịkwalite ụkpụrụ bụ otu ebumnuche bụ isi chọrọ ngwa ngwa ntị.
BANYERE BANYERE AFỌ AFỌ
Tọrọ ntọala na 2018, ndị African Tourism Board (ATB) bụ otu mkpakọrịta mba niile toro maka ime ka ihe mepụtara mmepe ọrụ njem na njem nleta na site na mpaghara Africa. Ndi otu ndi njem nlere anya nke Afrika bu nke Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP).
Ndị otu a na-enye nkwado maka imekọ ihe ọnụ, nchọpụta dị omimi, na ihe ọhụụ maka ndị otu ya.
Na mmekorita ya na ndi otu ndi otu na ndi mmadu, ATB na-eme ka onu ogugu, uru, na ogo nke njem na njem gaa, site na, n'ime Africa Ndị otu a na - enye ndị ndu na ndụmọdụ n’otu n'otu na mkpokọta ndị otu otu ya. ATB na-agbasawanye ohere maka ahia, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, itinye akara, ịkwalite, na ịtọlite ​​ahịa ndị ahịa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Board of Tourism Board, pịa ebe a. Isonyere ATB, pịa ebe a.